Tresaka Archives - Page 78 sur 136 -
« Naloan’iza »
26/10/2017 admintriatra 0
Isika ve rehefa miady hevitra, na mialohan’ny handraisana fanapahan-kevitra mba manao todika ivoho mijery ny lasa? Iza no nandoa ny karaman’ny mpampianatra any amin’ireny sekoly tsy miankina ireny nandritra ny grevy nifanesy teto amin’ny firenena? …Tohiny
« Mirary soa ! »
25/10/2017 admintriatra 0
Lasa resabe indray izao ilay fanapahan-kevitry ny Fiangonana Katolika manodidina ny daty fidiran’ny mpianatra. Amin’ny faha-6 Novambra ho avy izao mantsy no daty nambaran’ny fanjakana fa hiverenan’ny mpianatra any an-tsekoly, fanapahan-kevitra noraisina ho fitsinjovana ireo …Tohiny
« Miady amam-paty! »
24/10/2017 admintriatra 0
Asa aloha raha tena marina ny nambaran’ny gazety mpiseho isan’andro iray izay nilaza fa noho ny fanatrehan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny fandevenana ny filoha teo aloha Zafy Albert no antony tsy nahatongavan’i Marc Ravalomanana sy …Tohiny
« De ny tena no menatra ! »
21/10/2017 admintriatra 0
Nitory an’i Maherilanto Manandafy eny anivon’ny zandarimaria i Lalatiana Rakotondrazafy. “Cybercriminalité” voalazan’ny andininy faha-20 eto no resaka, ilay andininy notoheriny mafy sy nananganany vozona ho ren-tany ren-danitra. “De ny tena no menatra e!”. Hay ve …Tohiny